AirPods mampihena ny fotoana fandefasana bebe kokoa hatramin'ny 2-3 herinandro | Avy amin'ny mac aho
Ny AirPods dia mampihena ny fotoana fandefasana somary mihoatra ny 2-3 herinandro
Mbola hitohy ny fihenan'ny fotoana fandefasan'ny Apple AirPods fotoana fohy ary taorian'ny 6 herinandro izay nanananay nandritra ny fotoana ela dia lasa 4 herinandro lasa izay, ankehitriny rehefa afaka andro vitsivitsy miaraka amin'ity ora fandefasana ity dia efa manana fotoana kely kokoa isika ho an'ny fandefasana, 2 - 3 herinandro any Espana.
Ny fanombohana ireo headphone Apple Bluetooth ireo dia nahemotra lava kokoa noho ny mahazatra amin'ny vokatra Apple ary farany tamin'ny 13 Desambra 2017 dia tonga tany Espana izy ireo. Ny famoahana dia namidy ny tahiry tao anatin'ny fotoana fohy ary avy eo nankany asehoy ny ora fanaterana hatramin'ny 6 herinandro, ka hatramin'ny vao haingana dia naharitra 4 herinandro ary lasa 2 -3 herinandro.
Ny tale jeneralin'ny Apple tenany rahateo dia efa nampitandrina fa "manenjana" ny famokarana an-telefaona izy ireo ary hihena tsy ho ela ny fotoana fandefasana. Raha ny tena izy, fantatra ihany koa fa ireo mpampiasa rehetra te-hividy ny AirPods dia mety efa nanao izany, ka miampy ny zavatra rehetra ary mihena ny fotoana.
Izahay dia miatrika ny iray amin'ireo vokatra Apple izay sarotra ny manamboatra azy ary teboka iray hafa koa tokony ho raisina raha miresaka momba ny ora fanaterana izahay. Hatrany am-boalohany fa sarotra ny famokarana ireo headphone tsy misy tariby ireo ary izany dia tsikaritra tao amin'ireo fandefasana. Raha ampianay fa ny fangatahana ny vokatra dia tena avo lenta tamin'ny fiandohan'ny varotra, dia vokatr'izany ny tsy fahampian'ny tahiry be loatra, saingy toa mihamafy ny zava-drehetra ary ny fitomboan'ny famokarana miaraka amin'ny fangatahana ambany dia mahavita fitsaharana.
Mety afaka andro vitsivitsy dia hitombo ity tahiry ity ary hihena ny fotoana fandefasana fa raha sanatria dia tsara kokoa ny manao ny fividianana faran'izay haingana na mampiasa istocknow hahita ny tahirin'ny AirPods any amin'ny magazay.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple products » Ny AirPods dia mampihena ny fotoana fandefasana somary mihoatra ny 2-3 herinandro
F1 2017 ho avy ny 25 Aogositra ho an'ny mpampiasa Mac